Kpachara anya otú i si ana ndị mmadụ n’ibé (1-5)
“Gị onye umengwụ, gakwuru ndanda” (6-11)
Onye nzuzu nke bụ́kwa onye ajọ omume (12-15)
Ihe asaa Jehova kpọrọ asị (16-19)
Kpachara anya maka nwaanyị ọjọọ (20-35)
6 Nwa m, ọ bụrụ na ị nara onye agbata obi gị n’ibé,+Ọ bụrụ na e nwere ihe gị na onye ị na-amaghị kwekọrịtara,*+ 2 Ọ bụrụ na nkwa i kwere arapụtala gị,Ọ bụrụ na ihe i ji ọnụ gị kwuo etinyela gị ná nsogbu,+ 3 Nwa m, ebe ọ bụ na ị banyela n’aka mmadụ ibe gị,Mee ihe a ka ị gbara isi gị: Gakwuru onye ahụ ozugbo. Weda onwe gị ala rịọ ya arịrịọ.+ 4 Ekwela ka ụra gaa gị n’anya,Ekwekwala ka ụra buru gị. 5 Napụta onwe gị otú ele si agbapụ n’aka dinta,Otú nnụnụ si agbapụ n’aka onye na-achụ nta nnụnụ. 6 Gị onye umengwụ, gakwuru ndanda.+ Leruo otú ha si eme ihe anya ka ị mara ihe. 7 Ọ bụ eziokwu na ha enweghị ọchịagha, onyeisi, ma ọ bụ onye na-achị ha, 8 Ha na-akwadebe nri ha n’ọkọchị,+Ha na-akpakọtakwa ihe oriri ha n’oge a na-ewe ihe ubi. 9 Gị onye umengwụ, olee mgbe ị ga-esi n’ebe i dina bilie? Olee mgbe ị ga-esi n’ụra bilie? 10 Ihitụ ụra, irotụ ụra,Na ịkụkụwatụ aka ka i zuo ike+ 11 Ga-eme ka ị daa ogbenye na mberede ka à ga-asị na onye ohi zuru gị ohi na mberede,Ị ga-adakwa ụkpa ka à ga-asị na mmadụ ji ngwá ọgụ bịa nakọrọ gị ihe niile i nwere.+ 12 Onye nzuzu nke bụ́kwa onye ajọ omume na-ejegharị na-ekwu ihe na-enweghị isi.+ 13 Ọ na-atabiri mmadụ anya,+ na-akụ ụkwụ ya n’ala, na-emegharịkwa mkpịsị aka ya mgbe ọ na-aghọ ndị ọzọ aghụghọ. 14 Ebe o bu ihe ọjọọ n’obi,Ọ na-akpa nkata ọjọọ mgbe niile+ ma na-ekwu ihe ga-akpata esemokwu.+ 15 N’ihi ya, ọdachi ga-adakwasị ya na mberede. A ga-ala ya n’iyi kpamkpam n’otu ntabi anya.+ 16 E nwere ihe isii Jehova kpọrọ asị. N’eziokwu, e nwere ihe asaa dị oké njọ n’anya ya: 17 Mpako,+ ịgha ụgha,*+ igbu* onye aka ya dị ọcha,+ 18 Ịkpa* nkata ọjọọ,+ ime ngwa ngwa gaa mee ihe ọjọọ,* 19 Ịbụ onye akaebe nke ụgha juru ọnụ+Nakwa ime ka ụmụnne na-ese okwu.+ 20 Nwa m, debe iwu nna gị nyere gị,Ahapụkwala ntụziaka* nne gị nyere gị.+ 21 Kee ha gburugburu obi gị mgbe niile. Nyara ha n’olu gị. 22 Mgbe ị na-ejegharị, ọ ga-edu gị. Mgbe i dina ala, ọ ga-eche gị nche. Mgbe i tetakwara, ọ ga-agwa gị okwu.* 23 N’ihi na ntụziaka bụ ọkụ e ji ahụ ụzọ.*+ Iwu* bụ ìhè,+Mba a bara iji dọọ mmadụ aka ná ntị ga-emekwa ka mmadụ dị ndụ.+ 24 Ha ga-echebe gị ka ị ghara ịdaba n’aka nwaanyị ọjọọ,+Ka nwaanyị na-akwa iko* ghara iji ire ụtọ rata gị.+ 25 Ekwela ka obi gị dịrị n’ebe ọ nọ maka na ọ mara mma,+Ekwekwala ka o jiri anya ọ na-akpịnyere gị rata gị, 26 N’ihi na nwaanyị akwụna na-eme ka nwoke bụrụ ogbenye ọnụ ntụ,*+Ma nwunye nwoke ọzọ na-ala ndụ nwoke ya na ya na-akwa iko n’iyi. 27 Mmadụ ọ̀ ga-agụkwasị ọkụ n’obi ya, uwe ya aghara ire ọkụ?+ 28 Ka mmadụ ọ̀ ga-eje ije n’elu icheku ọkụ, ọkụ aghara ire ya n’ụkwụ? 29 Otú ahụ ka ọ dị onye ọ bụla ya na nwunye onye agbata obi ya na-enwe mmekọahụ. E nweghị onye metụrụ nwaanyị ahụ aka a na-agaghị ata ahụhụ.+ 30 Ndị mmadụ anaghị ele onye ohi anya ọjọọMa ọ bụrụ na o zuru ohi maka na agụụ na-agụ ya. 31 Ma e jide ya, ọ ga-akwụ ụgwọ ihe o zuru okpukpu asaa. Ọ ga-eji ihe niile bara uru o nwere n’ụlọ ya kwụọ ụgwọ ya.+ 32 Onye ọ bụla ya na nwaanyị na-akwa iko enweghị uche. Onye na-eme otú ahụ na-ala ndụ ya* n’iyi.+ 33 A ga-emepụ ya ọnyá, mechuo ya ihu,+Ihere agaghịkwa akwụsị ime ya.+ 34 N’ihi na ekworo na-eme ka iwe ju nwoke lụrụ nwaanyị obi. Ọ gaghịkwa eme ebere ma ọ bọwa ọbọ.+ 35 Ọ gaghị anara ihe ọ bụla a chọrọ iji tie ya aka n’obi. Obi agaghị ajụrụ ya, n’agbanyeghị otú onyinye a chọrọ inye ya bururu n’ibu.
^ Na Hibru, “na gị na onye ị na-amaghị ekwee n’aka.”
^ Na Hibru, “Anya dị mpako na ire ụgha.”
^ Na Hibru, “Obi nke na-akpa.”
^ Na Hibru, “ụkwụ na-agbaga n’ihe ọjọọ ngwa ngwa.”
^ Ma ọ bụ “ga-akụziri gị ihe.”
^ Ma ọ bụ “bụ oriọna.”
^ Ma ọ bụ “Iwu Chineke.”
^ Na Hibru, “na-eme ka ọ bụrụzie naanị otu ogbe achịcha ga-afọrọ nwoke.”